महिला व्रत बसेको बेला यौनसम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ! « Deshko News
महिला व्रत बसेको बेला यौनसम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन !
धर्मशास्त्रमा महिला व्रत बसेको दिन सुद्ध दिन हुने भएको हुनाले यौन सम्पर्क गर्न नहुँने उल्लेख छ । दिनभर भगवानको नाममा उपवास बसेकी महिलामाथि सहवासको कुरा सोच्न पनि नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ । व्रत बसेको दिन महिलाहरू मानसिक रुपमा पनि तयार हुन नसक्ने र शारीरिक रुपले पनि निकै थकित हुने हुँदा सहवासका लागि बाध्य बनाउन नहुने परम्पारागत मान्यता रहेको पाइन्छ ।